RASMI: Jordan Henderson oo ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka sanadka ee qorayaasha kubadda cagta – Gool FM
(England) 24 Luulyo 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jordan Henderson ayaa loo caleemo saaray abaal-marinta qorayaasha kubadda cagta ee loo yaqaano Football Writers’ Association ee ciyaaryahanka ugu fiican xilli ciyaareedkan horyaalka Primer League.
Shabakada “Sky Sport” ayaa shaacisay in Jordan Henderson uu ku guuleystay abaal-marintan, kaddib markii uu ku garaacay xiddigaha kala ah Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, Sadio Mane, Alisson Becker, Alexander Arnold iyo Virgil van Dijk.
Shabakada ayaa tilmaamtay in Jordan Henderson uu ku guuleystay abaal-marinta, kaddib markii uu helay codadka ugu badan.
Haddaba kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marintan ayuu Jordan Henderson ka hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Waxaan ka mahadcelinayaa taageerida dadkii ii codeeyay iyo guud ahaan Ururka Qorayaasha”.
“Marka loo fiiriyo shaqsiyaadkii horey ugu soo guuleystay abaal-marintan ee aan kaga soo garab ciyaaray Liverpool sida Steven Gerrard, Luis Suarez iyo Mohamed Salah, waan garan karnaa qiimaha abaal-marinta”.
“Ma dareemayo in waxkasta oo aan ku guulaystay xilli ciyaareedkan ama intii aan ku jiray xirfadayda ay ahayd mid aan kaligay sameeyay, waxaan in badan uga mahad celinayaa shaqsiyaad badan, gaar ahaan asxaabteyda haatan, kuwaasoo cajiib ahaa, waxay mudan yihiin in la ixtiraamo”.